Lloc web de Dhismayaasha-yada waa mid cajiib ah. Taas waa arrin hordhac ah laakiin waa run dhab ah. Kuwa aad ka mid tahay wakhtiyadii hore taariikh ahaan sida aniga, dhismayaasha bogagga waa kuwa bogag intarnetka ah oo ah qalabka gawaarida ee baabuurta.
Waxaa jira meelo badan oo hareeraheeda ah oo mid walbana wuxuu ku siinayaa waxa ku soo kordha cera isku mid ah – awood u leh inuu abuuro internetka si degdeg ah iyo kaalmo yar. Awooddani waxay si gaar ah u caawineysaa ganacsiyada yaryar ama xitaa kuwa xor ah ee freelancers tan iyo markii ay ka baxayso koronto aan loo baahnayn taas oo si ka fiican loogu adeegsan karo meelo kale (sida kan cusub Wareysiga Star Trek Bluetooth!)
Waxaan rajeynayaa en Jerry uusan wax yar ka qabin xiriiriyaha Star Trek, laakiin dhibku waa sida ganacsi, dhamaanteen waan ognahay inay muhiim tahay en diirada la saaro dhaqdhaqaaqa ganacsigeena. Dhismaha websaydhku wuxuu noqon karaa mid aad u fog, laakiin marka ay fududeeyso ilaa qiimaha kharashka kaydka ah ee ka soo baxa si aan u dhigno inaan la iska indho-tirin – waa mentreigii la fiirin lahaa fursadaha.
0.1 Maxaad i isticmaashaa lloc web dhise?
1 6 Tallaabooyin fudud oo lagu dhisayo Website web ka Ganacsi ee Sitejet
1.1 1. Plantilla de Dooro
1.6 6. Soo saar web-kaaga
2 Lloc web de dissenyador de Haddii aad tahay
Maxaad i isticmaashaa lloc web dhise?
Shirkadaha oo dhan ma awoodi doonaan qorshaha, naqshadeynta iyo dhisida lloc web iyaga oo u gaar ah. Waxay badanaa qaadataa wakhti, khayraad iyo khibrad si et u awoodaan inay soo saaraan cera xoqan. Ka fikir arrintan – barnaamijka, waa lagu qosli karaa sida ugu sahlan ee loo qoro oo loo maamulo barnaamijka "Hola món" laakiin looyaqaan, iyagu xitaa ma garantayaan meesha laga bilaabo.
Si loo fududeeyo arrimaha miisaaniyada, shirkadaha sida Sitejet waxay la yimaadaan nidaamka dhismaha ee dhismaha kaas oo kuu ogolaanaya inaad isticmaasho dichabka la heli karo si aad u dhisatid boggaaga gaarka ah. Ka feker sida adoo isticmaalaya qalabka dhismaha ee horay loo soo dhejiyey, ka dibna duurjoogta ayaa la isticmaalaya.
Waa dhakhso, waa fududahay waxayna ubaahan tahay meel u dhow xirfadaha farsamada farsamada. Aynu eegno sida fudud u noqon lahayd dhisidda goobta ganacsiga leh Sitejet.
6 Tallaabooyin fudud oo lagu dhisayo Website web ka Ganacsi ee Sitejet
1. Plantilla de Dooro
Socodka caadiga ah ee aad la kulmi doonto Sitejet waa saxiixa (taas oo bilaash ah), sameyaka shabakad, isbedel, ka dibna daabac (taas oo aad u baahan tahay inaad bixiso). Taasi waa hab aad u sahlan oo loo isticmaalo habka loo isticmaalo tan iyo markii aad ku qanacsaneyn inaad isticmaasho sabab kasta, ma qarash geli doonto hal hal.
Plantilla de Doorashada ah ee bogga imtixaankayga.
Ka dib markaad és diiwaan-geliso waxaad abuuri carta shaakaad dashboard-ka ah – matrimoni-socodka ayaa kaa rabi doona inaad siiso magaca goobta iyo xulashada template. Waxaa jira hareeraha Noocyada 20-da si aad u doorato. Kuwani waxay kala duwan yihiin shakhsiyaadka gaarka ah ee shirkadaha guryaha iyo ganacsiyada suuq-geynta.
Demostració: Site Tusaalooyin Tusaalooyinka
CarFix – lloc web de maababyada-ka ee dayactirka baabuurta iyo adeegga ganacsiga.
Porter – Maababyada internetka ee makhaayadaha iyo baararka.
* Riix sawirka si aad u ballaadhiso.
Marka va dir la mateixa cosa, es va crear paper karta en un lloc que va danyar-se a casa o en garagi. Tani waxay kuu keeneysaa qaabeyn dheeraad ah oo cabsi galin leh oo la eg sida tiyaatarka tiyaatarka oo dhan meel dhan. Haddii aadan garantayn waxa aad u aragtid waa waxa aad helaysid (WYSIWYG) fikradaha, ka dibna waxaan kugula talinayaa inaad qaadatid daqiiqado yar si aad u raacdo safarka bilaabmaya bilowga. Cera de Walbana waa liisto.
Dhamaan boggaga ku yaal shaxanka ayaa lahaan doona qaar ka mid ah qoraalka meel bannaan oo keliya, si ay tusaan waxa ay u egtahay. Waxyaabuhu waxay noqon karaan kuwo fudud sidii ay u ilaalin lahaayeen cera kasta ‘sida’ ‘iyo labalabeyn labadaba meel kasta oo qoraalka ah kadib markaad buuxisid.
Tifaftiraha Sitejet WYSIWYG.
Xitaa bar-barka sare ee barra de navegació ayaa la diyaarin karaa. Labaadna riix barta iyo dhinaca bidixda, waxaad ku dari carta waxyaabaha ku jira menú de navegació.
Marka aan dhajiyo edebta, macnaheedu waa in the beddelo qoraalka waa sida fudud. Waxaad dooran karta sanduuqa waxaadna bedeli kartaa qoraalka keliya, laakiin seo kale midabka qoraalka, cabbirka qoraalka, nooca iyo wax kasta oo kale – sida Microsoft Word tusaale ahaan.
Qaybta hore waxay ka koobantahay qoraalka, laakiin waad isbeddeli kartaa muuqaalka iyo dareemida goobtaada. Mar labaad, laba jeer ku dheji wax muuqaal ah oo aad jeceshahay inaad bedesho oo dhinaca bidixda waxaad awoodi doontaa inaad bedesho aragti, waa cabbir, ku dar comprariryo, cera cera kasta oo kale.
Haddii aad rabto in aad bedesho sawir gebi ahaanba, kaliya laba jeer guji oo waxaad ku dhajin kartaa sawirradaada si aad u isticmaasho. Dhamaan sawirada aad gelisid waxaa lagu hayn doonaa maamulaha warbaahinta, diyaarna u ahaato inaad isticmaasho wakhti kasta sidaa daraadeed waa inaad kaliya hal mar u gudbisaa.
Sitejet ma bixiyaan sawirro si aad i isticmaasho sidaas darteed waxaad u baahan doontaa inaad ka hesho qaar ka mid ah adiga keligaa. Haddii aadan haysanin, ama ganacsigaagu aanu ahayn mid jireed, waxaa laga yaabaa inaad tixgeliso qaar ka mid ah boggaga sawirrada sida Getty Images halkaas oo aad ka iibsan kartid sawirada ama sawirrada. Ha kaliya ha soo dejin sawirada Google, ama waxaad i maleyn kartaa inaad dacwo u haysato xadgudubka copyright.
Xitaa haddii aad tahay astaan ​​la aasaasay, ka guuritaanka internetka waa wax laga yaabo inay wax iska beddelaan. Waxaad ogaan carta en habka aad adigu magac ku yeelatid marwalba aysan quseynin khadka tooska ah.
Xaaladdahan, waxaad go’aansan carta inaad laba siyaabo midkood u marzo. Waxaa laga yaabaa inaad jeclaan lahayd inaad dhisto websaydh shakhsiyeed, ama si dhammaystiran dib-u-sumayn. Nasiib wanaagse, tani maahan inay adkaato. Waxa jira adeegyo qaarkood oo ku saleysan webka oo kuu oggolaanaya inaad la shaqeyso sida saxda ah ee astaamo-qorista aad u baahan tahay.
Tusaale – Astaan ​​aan u abuuray shirkaddeena isticmaalaya Logo Bilaash ah oo Bilaash ah.
Qalabaynta, tusaale ahaan, waxay ku bilaabi kartaa kaliya naqshad astaan ​​aasaasi ah, ama waxaad kaheli kartaa inay dhisaan buuggaaga sumadda oo dhan – isla markaaba qaababka cusub ee qalabaynta.
Dabcan, tani waxay ahayd wakhtigii miyuusigga, sababta ay u dejinayso qoraalka iyo sawirada? Ku dar maaddo firfircoon oo lagu dhiirrigelinayo kuna dhiiri galiya daawadayaashaada. Waxaad ku dari karta waxyaallaha fiidiyoowga ah iyo walxaha warbaahinta bulshada sida isku xidhka bogga ganacsigaaga bogga Facebook.
Ama sababta aan khariidadda navigation, sop in macaamiishaadu si toos ah uga heli kartaa meheraddaada ganacsigaaga boggaaga internetka? Dhammaan waxan kaliya maaha inay soo qabtaan dareenkooda, laakiin waxay i shaqeeyaan sidii fududeeyaha ganacsigaaga.
Iyadoo malaayiin ka mid ah bogagga internetka ee maanta, way fududahay in the waayo. Ganacsiga yaryar, ma fududa ama jaban si aad u hesho qof kaa caawiya SEO-gaaga. Mahadsanid waxaad samayn karta qaar ka mid ah SEO-gaaga asaga oo kaaga yimaada Sitejet dhexdeeda.
Bog kasta oo ka mid ah boggaaga, ama xulashada la xushay waxaad awoodi doontaa inaad sheegto ereyada muhiimka ah iyo sharraxaadaha kaa caawin doona inaad soo dhejiso websaydhkaaga dareenka shabakadaha webka sida Googlebot.
Si aad u ogaato cera badan oo ku saabsan SEO iyo sida ay u caawin karto ganacsigaaga, fiiri maqaalka Jerry ee ku saabsan SEO 101 si aad u hesho fikrado aad ku duubi karto goobta ganacsigaaga si aad u hesho waxtarka ugu sarreeya.
6. Soo saar web-kaaga
Markaad tagto dhammaan tallaabooyinka kor ku xusan oo aad ku qanacsan tahay boggaaga cusub, waa mentreigii lagu heli lahaa adduunka. Si és fudud u riix badhanka waxaadna i furan carta ganacsiga – marca aad doorato qorshahaaga lacag bixinta, dabcan.
Sitejet waxay web daabacdaa keliya ee isticmaalaha lacag bil kasta ah $ 5 – waxaa jira gebi ahaanba wax lacag ah oo loo isticmaalo isticmaalka Dhismaha Bogga. Waxay ku siinayaan maalmo 14 ah si aad ula ciyaarto dhexdhexaadinta oo aad u dhisto website-kaaga, dhab ahaantii. Si aad runtii u sameysid goobta aasaasiga ah waxay kaa qaadi doontaa daqiiqado 20 haddii aad sooman tahay oo aad ogtahay waxa aad rabto – in badan oo aad qaadato wakhti aad ku qaadatid tababbarka ama sameyso meel gebi ahaan.
Sida tilmaamaha waxaan dhihi lahaa en daqiiqado 25 ay filanayaan en ay wax ka qabtaan template, saacadaha 2 ama wax ka badan haddii aad rabto wax gaar ah, ama maalmo yar si aad gabi ahaan uga noqoto goob ka soo xoqdo.
Lloc web de dissenyador de Haddii aad tahay
Sitejet waxay u oggolaaneysaa isticmaalayaasheeda en ay abuuraan mashaariic dhowr ah (bogag) mawduucooda, sidaas darteed haddii aad tahay naqshadeeye websaydh oo is boggaga macaamiisha kala duwan, tanina si gaar ah ayey kuu Ma aha oo kaliya inaad ogolaato in aad tirtirto mashruucyo badan, laakiin waxaa jira dhisme muuqda oo wax ku ool ah oo fueo kale kaa caawin kara inaad ka shaqeyso bogga internetka oo leh jawaab celinta macaamiisha hal dhinac oo dhan.
Waxa kale oo aad la shaqayn kartaa saaxiibka – waxaad i maleyn kartaa en uu yahay naqshadeeyaha garaafka ah isla markaana i qoro warqado si ay u dhistaan ​​qaybtooda intaad adigu sameysid. Marka dhan tan la mateixa, contoroolka goobta ayaa lagu wareejin karaa macaamiisha iyaga oo leh guddi madax bannaan. Waxay ku qori karaan qoraalkooda waqti kasta!
Hadda, si aad u bixiso qof si aad u dhisatid bogga aasaasiga ah ee aad ku soo celinayso wax ka hooseeya $ 300 ilaa kun oo doolar – oo aad weli ku dhali doonto qarashka sanadlaha ah ee magaca shirkada ganacsiga iyo marti gelinta webinta.
Dhab ahaantii, waxaa jira shirkado websaydhiyada marti galiya kuwaas oo si farxad leh uga baaraandegi doona $ 5 bishii Sitejet waxay waydiisaneysaa. Waxaan ogsoonahay a ganacsigaba, aad u badan tahay aad diirada saarto waxa aad ku fiican tahay, laakiin Sitejet oo aad u fudud in the abuuro boggeena gaarka ah, maxaad u qarineysaa lacag dheeraad ah?
Уебсайт на Dhismayaasha-yada waa mid cajiib ах. Taas waa arrin hordhac ах laakiin waa
Dhismayaasha websted-yada waa mid cajiib ah. Taas waa arrin hordhac ah laakiin waa run
Dhismayaasha կայք-yada waa mid cajiib ah: Taas waa arrin hordhac ah laakiin waa run